Somali - 01. Conversation - Booklet 5: Tobanka Mucjisooyinka ee Masiixa ee Quraanka | Grace and Truth
Home -- Somali -- 01. Conversation -- 5 Miracles of Christ
5 - TOBANKA MUCJISOOYINKA EE MASIIXA EE QURAANKA
Sideen u isticmaali karnaa waxa Quraanka ku saabsan Masiixa?
Quraanka wuxuu sheegayaa in Masiixu mucjisooyin sameeyay. Maxay yihiin 10-ka mucjisadood ee Masiixa ee Quraanka? Sidee loogu adeegsan karaa markay Masiixa la wadaagayaan muslimiinta? Raadi adiga oo baranaya buugyarahan.
5.02 -- The mucjisooyinka Masiixa - caddeyn ah oo uu howlgalka rabbaaniga ah?
5.03 -- Caddaynta Masiixa (bayyinaat)
5.04 -- Calaamadaha cajiibka ah ee 'Isa iyo Muxammad ('aayaat)
5.05 -- Masiixa wuxuu u hadlaa sida ilmo dhasha
5.06 -- 'Isa wuxuu abuuraa shimbir
5.07 -- Bogsiinta indhoolayaasha
5.08 -- 'Isa nadiifiyaa oo baras
5.09 -- Baraaruga ee dhintay
5.10 -- Ah gabi ahaanba hal
5.11 -- Miiska samada
5.12 -- 'Isa oo ah sharci-dajiye rabbaani ah
5.13 -- Masiixu wuxuu cusbooneysiiyay kuwa raacsan
5.14 -- Aayadda dhabta ah
5.15 -- Baaris
5.01 -- Tobanka Mucjisooyinka ee Masiixa ee Quraanka
Muxammad wuxuu rabay inuu ku guuleysto Nasaarada ku taal Jasiiradda Carbeed ee Islaamka. Sidaas ayuu u markhaati furay waxa uu ka maqlay Ciise oo ka yimid addoonada Masiixiyiinta ah, oo ka yimid wufuudo kaniisado ku yaalla Waqooyiga Yaman, oo ka yimid safarro ka yimid Itoobiya, iyo saaxiibbadiis Fiqi hadda. Muxammad waxa la yaabay wiilka Maryan iyo mucjisooyinkiisa. Waxa uu ogaaday in mucjisooyinkiisa ay ka baxeen awoodaha dadka, sidaa daraadeedna waxay u tixgeliyeen in ay yihiin caddayn (bayyinaat) oo uu leeyahay awoodiisa rasmiga ah (Suras al-Baqara 2:87, 253; al-Ma'ida 5:110; al-Zukhruf 43:63; Al-Saff 61:6).
Muxammad wuxuu ka hadlayaa sagaal mucjisooyin ah oo uu Muuse sameeyay Masar, oo uu sidoo kale ugu yeeray caddaynta (Suras al-Baqara 2:99; al-Asra '17:101). Laakiin mucjisooyinkii Muuse waxay ahaayeen kuwo ka mid ah ciqaab ah oo ay Alle u dulqaadatay Masar si ay u sii daayaan carruurtii addoonta ahayd ee reer Yacquub. Mucjisooyinka Ciise ee ku sugan Quraanka, si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqdaan kuwo si fiican u muuqda sida barakooyinka Ilaahay inay hoggaamiyaan reer binu Israa'iil si ay u aaminaan una adeecaan 'Isa.
Muxammad waxa uu ahaa khasaare ah in uu naftiisa uuna awoodin in uu sameeyo wax mucjiso ah ama mid mucjiso ah. Waxa uu fahmi waayay sababta ay ugu badnaayeen Yuhuuddu inay ku adkaadeen inay diidaan caddaynta ugu weyn ee Wiilka Maryan, laakiin wuu diiday oo wuu necbahay.
● Sura al-Baqara waxaan akhrinay in 'Isa awoodi waayey mucjisooyinka isaga oo aan ka helin caawinta Ruuxa Quduuska ah (Sura al-Baqara 2:87). Muxammad wuxuu u malaynayay in Eebe u soo diray Djibril (Jibriil) inuu xoojiyo wiilka Maryan si uu u samayn karo mucjisooyinka weyn. Muxammad waxa uu ku andacooday bayaankan in Masiixu uusan awoodin inuu sameeyo wax mucjiso ah isaga qudhiisa. Si loo fuliyo wuxuu u baahan yahay caawinta malaa'ig ka timid Alle, oo uu ugu yeeray Ruuxa Quduuska ah.
Mawduucan inta badan si khalad ah ayaa loogu turjumaa "Ruuxa Quduuska ah". In Qur'aanka Ilaah qudhiisu waa "Kan Quduuska ah", ruuxuna waa addoonkiisa. Ruuxa Kan Quduuska ah ma aha mid qudha oo qudha oo aan laheyn dabeecadda rabbaaniga ah. Wuxuu abuuraa Ilaaha Qaadirka ah. Ruuxan Qur'aanka ah waa inuusan marnaba la jahwareerin Ruuxa Quduuska ah ee Injiilka, inkasta oo Muxammad laga yaabaa in uu ka fikiray in Ruuxa Quduuska ahi uu yahay ruuxa Ruuxa Quduuska ah ee xoojiyay Wiilka Maryan. Sida Muxammad u muuqan lahaa inuu si aan toos ahayn u aqoonsan midnimada midnimada Quduuska ah, sababtoo ah Quraanka saddexda - Allah, Ruuxiisa iyo Masiixa - waxay keeneen mucjisooyinka wadajirka ah!
Muxammad ma fahmi karin in Yuhuuddu ay si joogto ah u diideen caddaynta Rasuullada Alle, laakiin waxay u yeeraysaa beenaalayaal waxayna xitaa ku dileen qaar ka mid ah (Sura al-Baqara 2:87)!
● Suurad la mid ah (al-Baqara 2:253) Muxammad wuxuu qirayaa in ay jiraan farqi weyn oo u dhexeeya Rasuullada llaah. Waxa uu midba midka kale ka doorbiday isaga oo siinaya boos sare. Si Muuse wuxuu si toos ah ugala hadlay, kaas oo uu ku sameeyey Muxammad. Ugu dambeyntii wuxuu helay sheekooyinka loogu yeero iyada oo loo marayo ruux aan la aqoon, oo uu mar dambe ugu yeeray Djibril. Muhammad qudhiisu wuu diiday Alle, mana maqlin isaga! Waxa uu lahayn xiriir shakhsi ah Ilaah.
Sida laga soo xigtay Qur'aanka, Allah wuxuu wiilka Maryan meel sare ka saaray Muuse, sababtoo ah wuxuu siiyay caddayn gaar ah (bayyinaat) isaga oo xoojiyay isaga oo leh ruuxa Quduuska ah. Muxammad wuxuu madaxiisa ku garaacay dagaalkii qadhaadhka ahaa ee Yuhuudda iyo Masiixiyiinta ee ka dhanka ah midba midka kale iyo kala qaybsanaantooda inkastoo ay ka mid tahay mudnaantaas (Sura al-Baqara 2:253). Waxa uu ku arkay khilaafkooda qiyaasta caqliga leh ee Alle in Islaamku yahay xoog saddexaad oo ka soo horjeeda labadan xisbi. Muhammad ma ogayn in Wiilka iskutallaabta lagu qodbay Ilaah iyo xaqnimadiisa of dembilayaasha, marka laga reebo camalka wanaagsan, sababta ugu weyn ee muranku u dhexeeya Yuhuudda iyo Masiixiyiinta. Muslimiinta iyo Yuhuuddu waxay inta badan ku dhow yihiin midba midka kale ee Masiixiyiinta ah iyo Muslimiinta!
● Saalax al-Ma'ida waxaan ka akhrisanay mid ka mid ah afarta khudbadood ee Alle subxaana watacalaa ee ku sugan Quraanka (Sura al-Ma'ida 5:110). Waxa uu yiri: "Xusuuso nimcadayda aan adiga iyo hooyada idin siiyay markii aan kugu xoogaystay ruuxa Quduuska ah." Dabadeed wuxuu raacay liisyo dhowr ah oo mucjisooyin ah oo Masiixa ah oo uugu sarreeya bayaankii in Allaah dib loogu celiyay reer binu Israa'iil "Isa, si aanay u dili karin isaga, inkastoo uu u yimid iyaga caddayn cadcad (bayyinaat). Markaasay nacay, oo waxay yidhaahdeen, Taasu waa khiyaano oo kale.
Aayaddani waxa ay mar kale u muuqataa Masiixa oo ah midkii la siiyey oo ka caawiyay Ruuxa llaah. Tani waxay cadeyneysaa in Qur'aanka Wiilka Maryan uusan haysan wax dabiici ah ama karti leh. Isla mar ahaantaana, Muhammad, waxa uu qirayaa mucjisooyinka aan la dabooli karin ee 'Isa oo ku magacaabaya caddaynta awooddiisa, isaga oo Alle siiyey. Muxammad ma fahmi karno hoosaysiinta Masiixa, markii uu is-diidey oo uu ammaanay dhamaanba Aabbaha, isagoo leh, "Wiilku keligiis waxba iskama samayn karo, wuxuu samayn doonaa waxa uu u arko Aabbihiis, maxaa yeelay wax kasta oo Aabbuhu sameeyo Wiilka sameeyaa." (Yooxanaa 5:19)
● Suurada al-Zukhruf waxaan ka akhrinay sharaxaadaha sharraxaadda ee ah cadeeymaha Masiixa (Sura al-Zukhruf 43:63): Wuxuu ula yimid Yuhuudda "xigmad" si ay u furaan indhahooda sababta ay u dhaleecaynayaan iyo is-khilaafsanaantooda. Malaha Muxammad ayaa maqlay maqaalkii Ciise ee Matayos 7:1-28 iyada oo la adeegsanayo dhaqanka afka, iyo sharaxaad ka bixisay hadalka Masiixa sida dadaalka lagu xalinayo xisbiyada dagaalka. Sidan "Ciise wuxuu dalbaday addeecitaan shuruud la'aan ah iyo isu dhiibitaankiisa amarradiisa.
● Sida laga soo xigtay Sura al-Saff, 'Isa wuxuu u yimid reer binu Israa'iil si uu u xaqiijiyo in Tawreed aan la been abuurin (Sura al-Saff 61:6). Sharaxaaddan gaarka ah ee ujeedada ujeedada "Isa yimaada wuxuu ina siinayaa fursad aan ku cadeeyno Muslimiinta in Kitaabka Quduuska ah aan wax laga bedelin, sababtoo ah, sida ku cad Quraanka, shaqada ugu horraysa ee Masiixa wuxuu ahaa inay xaqiijiso nicmada Quraanka.
Si kastaba ha ahaatee, ujeedada ugu dambeysa ee "Isa ayaa imanaya, ujeeddada ugu dambaysa ee mucjisooyinka, sida uu qabo Quraanka, waa balan muujinaysa Wiilka Maryan ka dib isaga ka dib si weyn loogu ammaanay malaa'igta llaah ee iman lahaa. Iyada oo waxsii sheegyadani Muxammad ayaa gooni u dhigay inuu yimaado 'Isa afkiisa! Tan iyo markaas, Muslimiintu waxay baadhaan Kitaabka Quduuska ah ee loogu magac daray Magaca Muxammad, oo macnihiisu yahay "Kan la ammaanay". Faallooyin dhowr ah oo muslimiinta ah ayaa u maleynaya in Muxammad yahay Parakletos ballanqaaday, Ruuxa Raaxada. Si erayga Giriigga ah u dhigmo Muxammad, Muslimiintu waxay bedeleen shaqooyinkii Parakletos u ahaa Periklytos, taas oo macneheedu yahay "Qodobka ugu sarreeya". Sidaa darteed Muslimiintu waxay ku eedeeyeen Masiixiyiin in ay dabooleen ama been abuureen waxsii sheegista 'Isa ku saabsan Muxammad ee Injiilka, ama magaciisa ka tirtiray Kitaabka Qudduuska ah.
Saddexda aayadood ee Quraanka mucjisooyinka Ciise waxaa loogu yeeraa calaamadaha ('aadaat') ee hawshiisa rasmiga ah (Suras Āl 'Imran 3:49.50; al-Ma'ida 5:114). Ereyga loo isticmaalo Muxammad waxa uu sidoo kale laga heli karaa Injiilka Yooxanaa si uu u sharaxo mucjisooyinka Ciise. Waxaan halkaas ka akhrisanay, "Tani waa calaamadihii ugu horreeyay ee uu sameeyay Ciise, oo uu muujiyay ammaantiisa." (Yooxanaa 2:11+12) Dad badan ayaa aaminay magaciisa markay arkeen calaamadaha uu sameeyay (Yooxanaa 2:23). Markii uu wiilka sarkaalka boqoradda meel fog ka bogsaday, Yooxanaa wuxuu ugu yeeray calaamad kale oo ah in Ciise uu sameeyay (Yooxanaa 4:54). Markay dadku arkaan calaamada (quudinta 5000) waxay ku yidhaahdeen, "Sida xaqiiqda ah waa kan Rasuulka ah ee u imaanaya dunida." (Yooxanaa 6:14) Si kastaba ha ahaatee, markii Ciise arkay markay u ordeen inay isaga ka dhigaan boqor, sababtoo ah mucjisada kibista, wuu ka baxay.
Ciise ma samaynin calaamadaha si uu dadka u rumaysto isaga, laakiin waa in ay aqoonsadaan jacaylkiisa, awoodiisa iyo awooda uu leeyahay ilaahnimadiisa. Ciise ma doonaynin in dadku raacaan mucjisooyinka, laakiin wuxuu filayay in towbad keenka iyo cusboonaysiinta. Ciise wuxuu dadka u digay oo wuxuu ku yidhi, "Haddii aanad arag calaamado iyo yaabab, ma rumeyn doontaan." (Yooxanaa 4:48) Injiillada waxaannu dhowr jeer akhrinnay in Ciise uu mamnuucay kuwii isaga bogsiiyey inuu ka hadlo isaga oo iyaga u bogsiiyey (Matayos 9:39; Markos 5:12; ; 8:56; 9:21).
Marka Ciise silcin jiray oo ku hanjabay geeridii Yeruusaalem, dadkii badnaa oo doonayay in ay arkeen mucjisooyinka waxay isaga ka noqdeen isaga. Xertii, oo dembiyadoodii hore u qirtay Yooxanaa Baabtiisaha, oo ay ku faani jireen jaahilnimadooda, waxay ku sugnaayeen Ciise. Waxay arkeen ammaantiisa xitaa markii la silciyo oo ku dhintay iskutallaabta. Markii Yuhuuddu Ciise u sujuudeen oo calaamo u doortay inuu u xaqiijiyo shuqulkiisii ​​iyo hawshii, waxaa u jawaabay oo ku yidhi, “Macbudkan dumiya, oo saddex maalmood dabadeed ayaan kicin doonaa!” (Yooxanaa 2:18-22) Oo wuxuu ku yidhi, “Waxaa jira farcan cammuud ah oo sakhraan ah, oo waxay heli doonaan calaamooyin, laakiinse lagama helin, calaamada Yoonis maahee.” (Matayos 12:39-40; 16:4)
Caddaynta iyo calaamadaha Muxammad la yeeli lahaa 'Isa Quraanka Quraanka wuxuu isku dayayaa inuu abuuro xaqiiqda uu rumaysadka Ciise diido! Sidaa daraadeed waa in aynaan u sharaxin calaamadaha Masiixa ee muslimiinta sababtoo ah waa mucjisooyin, laakiin waa inay walaac ku muujiyaan inuu ku faani karo weynaankiisa, jacaylkiisa, sharafnimadiisa, quduusnimada iyo maamulka. Ciise Masiixa qudhiisu waa in lagu ammaano isagoo tilmaamaya mucjisooyinkiisa. Mucjisooyinkoodu ma laha sharaf iyaga u gaar ah. Dhibaato kasta oo mucjiso ah oo aan keenin towbad keenka iyo dib u cusboonaysiinta ayaa ku fashilmay iimaanka qoto dheer ee Ciise.
Saddex jeer ayaan ku aragnaa warbixinta naxdinta leh ee Quraanka ku saabsan hadalka dhalaanka wiilka Maryan, oo weli jiifa qabaal. Xaqiiqda uu hadalku ku hadlayo laba jeer ayaa lagu sheegay (Sura Āl 'Imran 3:46; al-Ma'ida 5:110), hadalkiisu wuxuu si faahfaahsan uga akhrisan karaa Sura Marjam (19:24-33).
Sheekada aan la rumaysan karin in dhalaanka cusub ee 'Isa laga hadli karo si fiican, waxaa lagu sharaxay habab kala duwan faallooyinka Qur'aanka. Qaar waxay yidhaahdaan, 'Isa wuxuu u baahan yahay daqiiqado kaliya, qaar kalana waxay qaataan saacado, ilaa uu awoodo inuu waraaqaha, erayada iyo weedhaha ku dhejiyo qalad la'aan. Maskaxdiisa ayaa si sax ah loo horumariyay tan dhalashada, fahamkiisa, dareenkiisa iyo kartida macquulka ah ayaa la sameeyey wakhti aad u gaaban, ama si ay u sheegaan.
Maxay Mufasiriinta muslimiinta rumaysan yihiin oo uga wada hadli karaan dhacdadan? Waxay akhriyaan Quraanka in Masiixa yahay "erayga Ilaah" shakhsi ahaan. Ilaaha Qaadirka ah wuxuu baray Tawreed, Maahmaahyadii Sulaymaan, Injiilka iyo kitaabka asalka ah ee jannada, ka hor dhalashadiisa (Sura Āl 'Imran 3:48). Waxa uu ku dhashay adduunka oo buuxa aqoon, sirdoon iyo karti-u-hadalka. Waxa uu ahaa inuu si joogta ah uga hadlo ereyada llaah dhalashada ilaa dhimasho. Wuxuu u ekaaday sidii isagoo wata daahirkiisa, Eebana waa dhawyahay.
Quraanku wuxuu caddeeyay in wiilka Maryan uusan ahayn qof caadi ah, laakiin ruuxa Alle ee jidhka. Waxa uu ka soo degay agagaarka Axdiga Hore (Sura Āl 'Imran 3:45) wuxuuna haystay aqoon weyn iyo awood ruuxi ah oo ka sarraysa kuwa kale ee dhimanaya.
Qoraalkan naxdinta leh ee Quraanku wuxuu ku dhow yahay fahamka masiixiga ee ku saabsan wiilka Ilaah ee Injiilka. Laakiin Ciise wuxuu ku dhashay sida ilmo dhab ah oo aadanaha ku duudduubay maro. Hooyo Maryan marnaba uma aysan sheegin dhakhtarka Giriigga Luukos waxkasta oo kusaabsan hadalada wiilkoodu wuxuu xaq u yeeshay markuu dhashay, sababtoo ah markii ilmo uusan awoodin inuu hadlo oo uu u baahdo wakhti uu ku hormariyo (Luukos 2:40,52).
Halkee sheekadan cajiibka ah ka yimaadaa? In Injiillada carruurnimada apocryphal ee reer Suuriya iyo Coptic Kiristaanka waxaan ka helnay talo ku saabsan warar noocan oo kale ah. Hooyooyinka waxay u heesayeen heeso heeso leh oo ku saabsan ilmaha ilmaha yaryar si ay u seexdaan. Ilaha sheekada ku saabsan ilmaha la hadlaya Ciise ayaa loo yaqaan si faahfaahsan maanta.
Muxammad wuxuu maqlay sheekooyinka carruurta oo ka yimid addoonta Suuriya iyo Masiixiyiin dukaanka- oo iyaga rumeeyey! Waxa uu aaminsanaa in ka badan kaniisadaha Kaniisadda, oo aan ku jirin talooyinka caynkaa ah ee qoraallada Kitaabka Quduuska ah, sida ayan u dhicin. Sidaas Muhammad ayaa u muuqday inuu yahay qof doonaya inuu runta sheego, laakiin nebi ma jirin. Ma uusan kala saarin erayo iyo xaqiiqda.
Iyadoo la tixgelinayo sheekada loogu yeeray dhalashada wiilka Maryan (Sura Maryam 19:24-33) ilmuhu wuxuu rabay ugu horreyntii inuu ku raaxeysto hooyadiis dhalanteed, maxaa yeelay waxay u dhashay isaga oo aan guursan. Waxay ogaatay inay tahay in la dhagxiyo. Sidaa daraadeed dhalaanka Ciise dhashay ayaa ku booriyay iyada oo warka ku wargalisay in ay u dhalatay qof aad u qurux badan oo hoos timaada lamadegaanka.
Arjiga carabiga mid ka mid ah dadka aadka u caan ah waa suryun, oo leh jamacadaha dareenka ah, asriyaa ama saraat (oo dhan oo ka imanaya asalka carabiga S-R-W). Laakiin akhristayaasha xariifka ah ee Quraanka ayaa wax ka beddelay shaqadii iyo macnaha ereygan "daaq yar ama duufaan" (taas oo ah carabi waa sariyun) iyada oo laga soo saaro asalka S-R-Y oo leh jajabyada asriyat ama suryaan. Akhristayaasha Muslimiinta way caroodeen sababtoo ah 'Isa oo ah ilmo cusub oo horayba loo sii dejiyey Muxammad, sidaa darteed waxay si fudud u beddeleen shaqadii iyo macnaha' shakhsiyad gaar ah 'si' rivulet ', inkastoo ay fasiraadu ka dhigayso dareen yar.
Ilmaha dhasha ayaa markaa hooyadiis u sheegey in ay ruxaan xayawaanka timirta ah, isla markaana waxay sameeyaan taariikhda bislaado iyada oo ay u sii adkeyneyso kadib markii ay dhalatay xanuun. Waa maxay caqliga Baadiyaha ah! Rag dhowr ah ma awoodaan inay ruxaan roog. Sidee hooyada dhalin yar ay sidan u sameyn kartaa marka ay dhaleyso? Maalmihii Muxammad nolosha Baadiyaha waxay ahayd mid adag, laba jeer ayey adag tahay haweenka iyo hooyooyinka.
Dhamaadkii uu hadalkiisii ugu horreeyay ku yiri 'Isa ayaa u sheegay hooyadiis hooyadeed oo aad u jeceshahay waxa ay tahay in ay u sheegto qof walba oo ku waydiin lahaa asalka dhalaanka cusub ee ay u ballan qaadday llaah naxariista soonka oo aan la hadleynin qofkasta maalintaas. Sidaa daraadeed, taladii ugu horraysay ee uu dhashay ilmaha 'Isa wax u baray hooyadiis waxay ahayd khiyaano, fara-xumeyn, iyo been, si ay uga badbaadiso halis degdeg ah.
Warbixinta ayaa lagu soo bandhigay sida uu ubadku ubadkiisa difaacay hooyadiis oo ka soo horjeeda dadka tuugta ah ee cadhaysan isaga oo naftiisa u muujiyay inuu yahay nabi barakeeyaal ah oo uu ku hadlayo ilmihiisa labaad ee hadalka Quraanka.
Kuwa tixgeliya sheekadan sheeko ahaan waxay arki doonaan sida riyada iyo xaqiiqda ay isku kalsoonaadaan iyo noqdaan Fata Morgana oo maanka Muxammad ah. Quraanka oo idil waa sida isku dhafka iyo xaqiiqda.
Laga soo bilaabo isla khudbadii apocryphal waxay soo saartay sheeko kale: Dhallinyarada 'Isa ayaa sameeyay shimbir uga soo baxday dhoobo, oo ku dul burburtay, dabadeedna u duulay shimbirta! (Suras Āl 'Imran 3:49; al-Ma'ida 5:110). Waxaan ku fekereynaa inaan illowno sheekadan aan runta ahayn ee Wiilka Maryan, laakiin xaqiiqda ah in ay jiraan saddex arimood.
In Sura 'Imran' Isa wuxuu u sheegaa reer binu Israa'iil, "Waxaan idiin abuuri doonaa shimbir shimbir ah oo dhoobo ah." In Sura al-Ma'ida Allah, ka dib markii kacsanaanta 'Isa, ayaa xaqiijiyay, "Waxaad abuuray qaab shimbir ah oo dhoobo ah!" Mucjisadani waxa lagu caddeeyey Quraanka kariimka xilligan xaadirka ah iyo marxaladihii hore, mar markaa 'Isa iyo hal mar by Eebe qudhiisa. Tilmaamkan labanlaabku wuxuu qoraalka muhiim u yahay.
Labada meelba waxaynu maqlaynaa in 'Isa awooday inuu abuuro shimbir nololeed oo ka mid ah qalab aan nooleyn. Carabiga, ereyga "abuurista" (khalaqa) waxaa badanaa loo yaqaanaa Eebe, abuuraha, oo wax walba abuuray wax aan waxba ahayn. Laakiin erayga gaarka ah ee la mid ah ayaa loo yaqaan 'Isa, sidoo kale. Wuxuu yahay aadanaha kaliya, sida uu qabo Quraanka, inuu abuuro oo uu awood u yeesho inuu abuuro nolosha dhimasho. Masiixa Islaamka wuxuu u muuqdaa mid abuuraya.
Muhammad, si kastaba ha ahaatee, xaddiday sharaftiisa Wiilka Maryan oo soo bandhigay ereyga, "iyadoo leh ogolaansho Eebe!" marar dhowr ah oo ku jira aayadaha Quraanka oo la xidhiidha mucjisooyinka Masiixa. Sidaa daraadeed waxaan waydiisan karnaa Muslimiinta xasaasiga ah, "Miyaad run ahaantii rumaysan tahay in Masiixa, ogolaanshaha Alle, ay awood u yeelatay inay abuurto shimbir ka baxsan meydka?" Jawaabtu waxay noqon kartaa, "Dabcan, Quraanka wuxuu xaqiijinayaa labadan". Dabadeed waxaan u sheegi karnaa in Wiilka Maryan uu yahay abuuraha u gaarka ah - oo leh ogolaanshaha llaah!
Sheekadan sheekadani legendary ah waxaa ku jira dhacdo kale. 'Isa ayaa kor u qaaday shimbirta dhoobada afkiisa oo ku qarxay. Markaasay dhoobadii waxay noqotay hagaag, oo shimbirriina way ka sii socotay. Sida laga soo xigtey Quraanka, 'Isa wuxuu naftiisa ku bixiyaa neefsasho nololeed - oo leh ogolaanshaha Eebe, dabcan!
Kitaabka Qudduuska ah, Ilaah wuxuu ku afuufay "neefta nolosha" Aadan. Oo sidaas daraaddeed waxaa loo abuuray aadanaha kowaad (Bilowgii 2:7). Habeenkii fiidkii Masiixa wuxuu ku neefsadey xertiisa, laakiin wuxuu ku yiri, "Qaado Ruuxa Quduuska ah!" (Yooxanaa 20:22) Dabadeedna waa la soo nooleeyay, waayo Masiixa waa ruuxa noloshiisa (1 Korintos 15:45).
Muxammad, si kastaba ha ahaatee, ma u tagaan sida ugu fog sida in uu warbixintiisa. Markii Ciise uu ku dhacay waxyaabo aan nolol laheyn, ma uusan noqonin bini'aadan, ilmo aan dhalan oo Ilaah ah, laakiin kaliya wax sida shimbir! Muxammad ma uusan dafirin in Ciise naftiisa uu ku dhashay nafta nolosha ee abuuraha.
Sheekada ku saabsan abuurista shimbir ayaa ku dhiirigelisay faallooyinka Quraanka inay ka madax banaan yahiin, maxaa yeelay haddii uu Isa awooday inuu abuuro shimbir nololeed oo ka timaad alaabta dhintay, xitaa haddii uu ogolaansho Eebe, ka dibna wuxuu ka fogaa dhammaan ragga kale, xitaa ka sarreeya Muxammad. Sidaa daraadeed turjubaano ayaa qora, "Isa wuxuu rabay inuu abuuro xayawaan afar lugood leh ama shimbir duulaya, laakiin labaduba way khaldan yihiin, waxa ka soo baxay dadaalkii uu ahaa" bat ", oo aan ahayn shimbir ama naas-nuujin, laakiin labadaba isla markaa. " Waxaan ka jawaabi karnaa caqabadaha noocan oo kale ah, "Fududku waa xayawaanka kelida ah oo si gaar ah loo horumariyo, waayo waxay u qaadataa unug ultrasound ah (sida radar) afkiisa, iyo xataa duulimaadkii habeenkii, sida diyaaradaha casriga ah!"
Ka dib labadii mucjisooyin yaab leh ee dhalinyarada Isa, taas oo Muxammad uusan ahayn mid ka masuul ah, tan iyo markii uu ka qaaday munaafaqnimada carruurta ee apocryphal, waxaanu akhrinay warbixinta ku saabsan Masiix qudhiisa, oo xaqiijiyay by Allah, in Ciise uu awooday inuu bogsiiyo indho la ' dadka (Suras Āl 'Imran 3:49; al-Ma'ida 5:110).
Warbixinnadan waxaan dareensiineynaa naxariista Masiixa kuwa aan la arki karin iftiinka qorraxda iyo iftiinka mugdiga. Wiilka Maryan, sida Quraanka, ma samaynin mucjisooyin si ay u muujiyaan ama u ku guulaystaan boqorro iyo amiirro naftiisa, laakiin wuxuu rabay inuu caawiyo dadka buka, kuwa gardarrada ah iyo jahwareerka bulshada. Naxariistiisa iyo jacaylkiisu wuxuu sameeyey calaamooyinkiisa.
Ereyga carabiga ah ee "si loo bogsiiyo" (bari'a) ee Quraanka wuxuu ku xiran yahay fikradaha ah "si cad loo" ama "loo nadiifiyo". Haddii cudurku u yahay ciqaabta Alle dembiyada qarsoon, Masiixa ma aha oo kaliya bogsiinta xanuunka laakiin wuxuu sidoo kale la tacaalayaa sababtiisa.
Ciise indhoolaha indhaha ma furin, mindi fiiqan, ama laydhka laysarka, uma baahnin wax daawo ah ama antibiyootiko ah, laakiin wuxuu ku bogsiiyay ereygiisa keligiis. Ma uusan isticmaalin sixir, jilicsan ama jinni qosol leh, laakiin wuxuu xor ka ahaa silicii, dadka musuqmaasuqa ee mugdintiisa by ereyga awoodda kali ah. Dabcan, Muxammad waxa uu ku daray jumladta qalafsan: "ee leh ogolaanshaha ilaahay!" Si kastaba ha ahaatee, qof kastaa wuu aqoonsan karaa awoodda Ciise Masiixa iyo jacaylkiisa xagga kuwa la iska indhatiray ee kitaabka Muslimiinta.
Quraanka muslimiinta ma barto faahfaahinta sida, meesha, goorta ama cidduu Ciise furay indhaha. Sidaa daraadeed qoraalladan waxay u baahan yihiin markhaati indhaha ka ah Injiillada. Waa in aan u furanno Kitaabka Quduuska ah ee loogu talagalay muslimiinta xiisaha leh, laakiin waa in aysan iyagu akhrin sheekooyinka iyaga naftooda laakiin ku dhiirigeli inay akhriyaan marinnada naftooda, si ay uga adkaadaan cidhib-tirkooda iyo Qorniinka Quduuska ah gacanta u galaan oo ay u arkaan Ciise indhaha qalbigooda. Sidaa darteed waxay aqoonsan karaan in Ciise marnaba cidna ku qasbin inuu aqbalo gargaarkiisa ama bogsashada, laakiin sugayay illaa uu jirraday isaga oo u yimid ama u qayliyey caawimaad. Ciise wuxuu rabay in uu bilaabo rabitaanka in lagu bogsiiyo dadka silica, ilaa ay weydiisteen bogsashada. Isagu wuu toosay iyaga oo isku hallaynaya isaga iyo in uu awood u leeyahay, si uu uga dhigi karo iyaga ka culus. Marmar dhif ah ayuu bogsiiyaa haddii qofku aanu ku kalsoonayn dhakhtarka dhakhtarrada oo dhan. Masiixa kuma qasbi karo qofkisa, laakiin wuxuu ku dhisan yahay doonista, iimaanka iyo jacaylka, isaga oo u madax furan. Ciise waxa uu tilmaamayaa in qofku uu qayb ka yahay inuu bogsiiyo, isagoo leh, "Rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey." (Matayos 8:22, Markos 5:34; 10:52, Lukos 7:50; 8:48; 17:19; 18:42). Dhammaan tani waa wax la yaab leh Muslinka. Ma garanayo badbaadiye ama caawiye. Ku kalsoonow Masiixa, Bixiyihiisa, waa in la kobciyaa, si uu u koro isaga ruux ahaan.
Labada weriyadood ee Quraanka ah ee ku saabsan nadiifinta iyo bogsashada dadka baraska ah ayaa markhaatiyada 'Ciise iyo Allaah mar kale ku adkeynaya mucjisooyinkaas (Sura' Iman 3:49; Al-Ma'ida 5:110). Foomka Carabiga ee lepers bogsiyada leh ayaa lagu qoray qoralka, laakiin macnaheedu waa noocyada wadajirka ah ee daboolaya bukaankan. Sida indhoolaha, tani macnaheedu maahan mid mucjiso ah, laakiin taxane ah oo ah bogsiin cajiib ah oo Masiixu ku sameeyay lepers.
Haddii aad la kulantay dhibaatooyinka noocaas ah ee Hindiya, oo leh faraha maqan iyo wejiyada la jajabiyay, si wadajir ah ula socdaan saldhigyada saldhiga, waxaad fahmi doontaa jacaylka weyn ee Ciise, sharaftiisa iyo guusha uu ka qabay nacaybka iyo cabsida cudurka. Isagu ma uu eryin kuwii baraska qabay sidii iyagoo nijaas qaba, laakiinse ma aydnaan xajin. Waxa uu dhisay buunshahooda rumaysadkooda, si ay u fahmaan: Tani Ciise wuxuu i jecel yahay shakhsi ahaan! Masiixu wuu ka xoog badan yahay leprosy! Isagu wuu bogsiin karaa oo waan bogsiin doonaa (Matayos 8:1-4, Markos 1:40-45; Luukos 5:12-16). Markii Ciise bogsiiyey tobankii barasiyood ee uu ka filayay in ay qabaan iimaan aan caadi aheyn. Waxay ku kalsoon yihiin kii iyaga kula hadlay iyagoo jacaylka Ilaah u muujiyay isaga (Luukos 17:11-19).
Waxa ay sheegayso Quraanka waa xaqiiqooyin guud oo u baahan in la iftiimiyo Injiilka iyo markhaatiyadayada dheeraad ah: wuxuu inaga nadiifiyay dhamaanba xumadeena iyo nadaafadda.
Si loo bogsiiyo kuwa baraska ah ayaa lagu dari karaa cafiska Ciise. Waddamada qaarkood, Islaamka caanka ah, baruurta waxaa loo tixgeliyaa sida ciqaabta llaah ee dembiyada qarsoon. Halkan warbixinta kitaabiga ah ee ku saabsan bogsashada curyaanka ayaa caawin karta. Waxa uu filayay "bogsiin" ereyga Ciise, laakiin halkii uu maqlay wuxuu yidhi, "Qalbiyadow, wiilow, dembiyadiinna waa la cafiyay!" Markay qareenkii Tawreed u maleynayeen inuu Ciise caayay, ayuu u jeestay, oo wuxuu ku yidhi, “Maxaad qalbiyadiinna uga fikiraysaan qalbiyadiinna? Iyamaa hawl yar, in la yidhaahdo, Dembiyadaadu waa cafiyan yihiin, ama in la yidhaahdo, laakiin inaad ogaatid in Wiilka Aadanahu dhulka ku leeyahay amar uu dembiyada ku cafiyo ... wuxuu u jeestay ninkii curyaanka ahaa oo wuxuu ku yidhi, Kac oo sariirtaada qaado, oo gurigaaga tag. Markaasuu ninkii kacay oo gurigiisii tegey. (Matayos 9:1-8).
Haddii aad akhrinayso weedh gaaban oo lagu caddeeyey laba jeer Quraanka in Ciise uu kicin karo dadka dhintay, neeftaada ayaa laga yaabaa inay joogsato daqiiqad (Suras Āl 'Imran 3:49; Al-Ma'ida 5:110). Labadan aayadood waxaad ka heli kartaa qaabka jamac ah, ma ahan kuwa loo yaqaan! Carabiga macnihiisu waxa weeye in Masiixu ka sara kacay in ka badan laba, ama ugu yaraan saddex qof oo dhintay. Waxaa lagugula talinayaa in aad ogaatid wadnaha oo ku dhex yaal Injiilka halkaasoo uu Ciise soo toosiyey ilmo, dhalinyaro iyo qof weyn oo dhintay, iyo in ay akhriyaan aayadahaas oo ay la socdaan Muslimiin xiiso leh (Matayos 9:18-26; Markos 5:21- 43; Lukos 7:11-17; Luukos 8:40-56; Yooxanaa 11:1-45).
Quraanku wuxuu isticmaalaa labo shuruudood oo kala duwan oo loogu talagalay awooda kuwii dhintay ee Masiixa. In Sura Āl 'Imran (Sura Āl' Imran 3:49) wuxuu yidhi,
“Waxaan kan dhintay marar badan ayuu noolayn doonaa.”
Aayadda kale: (Surah Al-Maidah 5:110) Eebe ayaa xaqiijiyay,
"Waxaad soo diri dhintay (nool) baxay (Qubuurahooda iyagood)!"
Haddii aad ogtahay Muslimiin ah oo muujiyay xiisaha Masiixa, waxaad weydiisan kartaa isaga oo ku salaynaya labadan markhaati ee ku sugan Quraanka, "Yaa awooda inuu tooso kuwii dhintay?" Xaaladaha badankood jawaabtu waa "Qofna Alle ma ahan." Haddii aad mar kale waydiiso, "Miyaad sheeganeysaa in Masiixu yahay Alle, maadaama uu ku soo celiyay nolosha ugu yaraan saddex qof oo dhintay?" waxaad maqli doontaan wareer, "Waxaan ka magan Eebe idinkoo ka!" Hadaad weydiiso, "Laakiin Quraanka waxaad ku arki kartaa laba calaamad oo Masiixa si toos ah u soo toosiyay dadka dhintay," waad maqli kartaa jawaabta ka dib wakhti yar oo baadhitaan ah, "Laakiin mar kasta oo aad aragto ereyga ' Masiixu ma awoodin inuu kiciyo dadka dhintay. Sidaa daraadeed llaah ha u diro Jibriil si uu isaga xoojiyo, si uu u guto mucjisada mucjisada ah ee ujeeda kuwa dhintay si ay ugu sujuudaan Alle! "Haddii aad u socotid si taxadar leh," Sidaas ayaad aaminsan tahay in Alle iyo Ruuxa Quduuska ah iyo Wiilka Maryan ayaa si toos ah u sara kiciyay kuwii dhintay? "Waxaa laga yaabaa inaad maqasho qosol," Haa, oo lagu soo dejiyey Quraanka. "Kadib waxaad ku jawaabi kartaa," Sidaas ayaad aaminsan tahay wada shaqaynta Saddexmidnimada? ka dib markii diidmo horay loo soo jeediyay, u horseeday qoraallada Quraanka kariimka ah ee xaqiiqda ka ah midnimada Saddexmidnimada, xitaa inkastoo aysan xaqiijinaynin ruuxa iyo walaxda, lagama maarmaan in mujrimiintu ay ku qancinayaan dhammaan doodaheena Laakiin waxa uu noqon karaa caawimo isaga oo maqlaya fikradaha cusub ee lagu caddeeyey Quraanka, si uu u bilaabi karo inuu ka fikiro hab kale.Xaqiiqda ah in kuwii dhintay ay soo tooseen Wiilka Maryan waa wax aad u yaab leh oo aad is waydiisan kartid sababta Quraanka Muxammad uu ku daray maragkani oo uu ka maqlay Masiixiyiin ku wareegsan isaga. Waxa laga yaabaa inuu u soo bandhigay diintiisa diin ahaan diinta Masiixiga si uu ugu guulaysto Masiixiyiinta rumaysadkiisa.
Xaqiiqda ah in kuwii dhintay ay soo tooseen Wiilka Maryan waa wax aad u yaab leh oo aad is waydiisan kartid sababta Quraanka Muxammad uu ku soo daray maragkani oo uu ka maqlay Masiixiyiin ku wareegsan isaga. Waxa laga yaabaa inuu u soo bandhigay diintiisa diin ahaan diinta Masiixiga si uu ugu guulaysto Masiixiyiinta rumaysadkiisa.
Waxaannu aaminsan nahay in marqaatiga kufsiga ee dhimashada ee Quraanka uu u dhaqmayo sida khamiirada, oo u furi doono indhaha muslimiinta, oo ay u aqoonsan doonaan Masiixa runta ah ee leh nolosha weligeed ah. Markaasay fahmi doonaan in Masiixu noloshada weligeed sii siinayo qof kasta oo isaga ka codsanaya. Xaqiiqda ah in Masiixa uu sara kacay dadka dhintay waa caqabad ku ah dhammaan carruurta Ibraahim, Yuhuudda iyo Muslimiinta: "Ku alla kii rumaysta Wiilka ayaa leh nolosha weligeed ah, laakiin kii diida Wiilka ma arki doono nolosha." (Yooxanaa 3:36; 1 Yooxanaa 5:12)
In Sura Āl 'Imran waxaan helnaa aayad qariib ah sida' Isa u sheegay Yuhuudda inuu u socdo si ay u muujiyaan waxa ay cuneen qarsoodi iyo waxa hantidooda ay ku dhuuman jireen kabadhadoodii.
Sheekadan aan la garan karin waxay u ogolaaneysaa sharraxaadyo kala duwan: Yuhuudda badani ma aysan ilaalin sharciyadii Muuse, marar badanna waxay cuneen wixii la mamnuucay qarsoodi. Qaar kalena si dhaqso ah uma aysan soo shubin maalmaha la qorey oo si qarsoodi ah u cunay gurigooda wixii ay rabeen. Intaa waxaa dheer, waxay ku hayaan khasnado lagu qarsado boorsooyinkooda halkii ay siin lahaayeen masaakiinta iyo qaxootiga ka yimaada Mekka.
Al-Suyuti, oo ah faallooyin Islaami ah, ayaa yiri: "Isa oo ah wiil uu la ciyaarayay caruur kale marka uu u sheegay," Waxaan idiin sheegi karaa waxa waalidku cunayo markaad guriga ka maqan tahay, iyo waxa ay si qarsoodi ah ugu hayaan xirmooyinka qarsoodi ah. " Markii ay wiilasha weydiisteen waxyaabahaan, waalidkood way la yaabeen waxayna weydiiyeen caruurtooda, "yaa kuu sheegay sirahaas?" Markii ay caruurtu ku jawaabeen waxay ahayd 'Isa oo u sheegay sirahaas, waalidiintu waxay mamnuucayaan caruurtooda inay ku ciyaaraan Wiilka Marya oo iyaga xirxiradooda gadaashooda.
Marka Ciise mar dambe waydiistay waalidiinta saaxiibbadiis sababta uu u arki kari waayay wax badan oo uu u sheegay inaanay guriga joogin xilligan. Markuu Ciise u jawaabay oo ku yidhi, "Laakiin waxaan maqli karaa iyaga oo ka qaylinaya gadaashaada", waxay ku yidhaahdeen, "Kuwani waa uun doomaha hunguriga ah." Markaasaa Ciise u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, Xaqow, waxaa inoo wanaagsan oo ka mid ah jinniyadaada oo dhan oo aad ka maqashaan dhawaaqoodii oo dhan. Marka waalidku raadinayaan carruurtooda, 'erayada Ciise baa yimid. Dhammaan carruurtooda waxay noqdeen doofaarro!
Sheekadan naxdinta leh ee ka soo jeeda khayaali xeeldheer waxaa loogu talagalay Yuhuudda aan weligood ku haysan doofaarro xagga gadaashooda iyo sidoo kale Ciise naftiisa, si ay carruurta uga ilaaliyaan isaga, sababtoo ah waxa uu muujin karaa runta qarsoon. Si kastaba ha ahaatee, qoraalkan Quraanka wuxuu xaqiijinayaa in Masiixu uu ku arki karo derbiyadiisa! Sida laga soo xigtay Muhammad, wuxuu heystey "indhaha raajada". In Injiilka Yooxanaa waxaan ka akhrisan karaa in Ciise arkay dadka oo dhan. Uma baahnin wax macluumaad ah oo ku saabsan qofkasta, "waayo wuxuu ogaa waxa ku jiray nin." (Yooxanaa 2:24-25)
Aayaddan Qur'aanku waxa ay caddaynaysaa dhammaystirka 'Isa', laakiin waxay ka soo baxday gabagabadii khaldan. Ma aha cunto cuno qarsoodi ah, ama qarsoon qarsoodi ah oo uu Ciise ogaadaa Bixiyaha Bixiyaha. Wuxuu gashaa dembiyada qarsoodiga ah wuxuuna aqoonsadaa qofka dareenkiisa caddaaladda, daahfurnaanta iyo runta. Wuxuu doonayaa in uu badbaadiyo, nadiifiyo oo cusboonaysiiyo qof walba, mana rabo in uu gacmahooda ku hayo hodantinnadooda.
Muxammad wuxuu ka soo jeeday xiisadda sii kordhaysa ee u dhaxeysa qaxootiga isaga yimid isaga oo ka yimid Makka iyo dadka asalka ah ee Madiina. Muhaajiriinta ka soo jeeda Mekka nadir ma aysan helin shaqo, ma aysan laheyn guryo mana dhaxli karaan qaraabada. Dhinaca kale Muslimiinta Medinan asal ahaan ka soo jeeda ayaa noqday mid aad u jilicsan. Dadkii ugu dambeeyay waxay qaateen muhaajiriinta guryahooda waxayna ballanqaadeen in ay u daryeeli karaan walalahooda walaalaha ah. Laakiin runtii iyo xaqiiqadu waxay ahaayeen kuwo aad u fog. Dadka deegaanka ayaa cunay cunto fiican markii ay qaxootigu soo baxayeen, mulkiilayaasha guryaha ayaa hantidooda ka qariyay indhaha dadka magangalyo doonka ah. Muxammad wuxuu maqlay dhaqankaas oo jeclaan lahaa in uu gacmihiisa saaro kharashaadka qarsoon. Isaguna wuxuu ku yidhi, "Marka uu Ciise mar kale yimaado, wuxuu kuu sheegi doonaa waxaad qoreen wax qarsoodi ah iyo waxa aad ku qarinayso gurigaaga, maxaa yeelay, wuu arki karaa adiga oo dhan."
Waa inaan ka fekerno markhaatiga Quraanka iyo marka la siinayo talooyinka ruuxiga ah ee Muslimiinta ah, ka dhig iyaga inay ogaadaan inaan dhammaanteen u baahanahay in la baaro oo aan calaamad u ah jacaylka Ciise Masiixa iyo runta mar labaad! Lacagta qarsoodiga ah iyo hantida dadka Masiixiyiinta ah oo dhan waxay ku filnaan doonaan in ay dunida oo dhan ku faafiyaan, haddii shakhsiyaadka looga gudbi karo khasnadahooda.
In Sura al-Maida (5:112-115) waxaan ka heli karnaa qoraal ku saabsan quudinta ee 5.000 ee Masiixa ee qaabka Islaamka. Waxaan u turjumeynaa qoraalkan si macno leh, si ay Muxammad uga fekeraan fekerka iyo dabeecada Muslimiinta waxaa loo fahmi karaa asaas ahaan wadahadalkeena iyaga oo leh:
112 xertiisa waxay ku yidhaahdeen, "O 'Isa, Wiilka Maryam! Eebihiin diri kartaa hoos inoo miis oo cunto ah oo samada ka dhawaaqaya?"
Wuxuu ugu jawaabay (iyaga), "ka dhawrsada llaah haddaad Tihiin Mu'miniin!"
113 Laakiinse iyagu waxay yidhaahdeen, "Waxaan rabnaa in aan ka cuni oy Xasisho Quluubtanadu oon la amusin lahaa iyo naqaan in aad shaaca ka qaaday runta noo, oo waxaan noqon doonaa markhaatiyaal indhaha ku waxa (i.e. miiska) ee."
114 Markaas 'Isa, Wiilka Maryan ayaa tidhi, "Allahumma (Elohimm), Eebow dir noo miis oo cunto ah oo samada ka dhawaaqaya, si ay u noqon iidda inoo ah, waayo, kan ugu horreeyey iyo la soo dhaafay naga mid ah, oo calaamad kaaga timid, oo nagu filan annagoo raalli ka ah, oo wax walba adigaa iska leh.
115 llaah wuxuu yidhi kaasi waa Jid igu toosan (oo layska abaal marin) Eebana ma halmaansana waxa ka yaabi anuguna waxa ka mida kuwaan rumeynin Aayaadkanaga oo muslimiin ahayn.
Arrintan sheeko khayaali ah oo ku saabsan quudinta of 5.000 aan faallo sida soo socota:
● Dhowr jeer ayaa Muhammad u kala dhexeeyey Masiixiyiin marka loo eego qaangaadhnimadooda waxayna u yeedheen xertiisa (kuwa bilowga ah), caawiyaal dhiirranaan leh ama dagaalyahanno, tukashada rumaystayaasha, Muslimiinta, raacayaasha iyo marqaatiyaadka (Āl 'Imran 3:52-53). Sheekada miiska saaran ee jannada Isa wuxuu u hadlaa xertiisa asal ahaan.
● Quraanka, "Isa qudhiisu looma tixgeliyo" Rabbi ", laakiin Alle waa Rabbi. 'Isa had iyo jeer waa uu heystaa.
● Ka dib markii 'Isa uu ku bixiyay wacdinta dheer ee lamadegaanka, xertu waxay noqdeen gaajo. Ma aysan sugin ilaa ay Ciise u siiyeen cunto qaar, laakiin 'jeesasho' isaga oo su'aal ka keenay awoodda llaah, haddii uu awoodi karo inuu ku caawiyo. Runtii ma aysan rumaysan jacaylkiisa, laakiin waxay doonayeen inay isku dayaan.
● ‘Isa ma uusan la dagaallamin xertiisa oo rumaysadkiisa, laakiin ka cabsanayo llaah. Jacaylka Ilaah iyo kalsoonidiisa daryeelkiisa ma aha mowduucyada ugu waaweyn ee diinta Islaamka, halkii loo soo gudbin lahaa Alle iyo cabsi qoto dheer leh isaga.
● Muslimiintu maahan wax ballanqaad ah in la soo furtay oo aysan laheyn nabada gudaha ah sababtoo ah ma jirto diin Ruuxa Quduuska ahi diintiisa. Ruuxa Kan Quduuska ah ayaa loo tixgeliyaa inuu yahay Djibril (Gabriela), sidaa daraadeed Muslimiintu waxay inta badan raadiyaan caddayn dhab ah oo ku wajahan diintooda. Waxay rabeen inay markhaati ka yihiin miiska, ma aha fal 'Isa. Jadwalka iyo waxa ku dul yaalay waxay udub dhexaad u ahaayeen filashadooda.
● Si bareer ah, Wiilka Maryan ma baryeynin allah, laakiin Allahumma (Elohimm). Magacani wuxuu u muuqday inuu yahay furaha salaadda wax ku oolka ah ee laga yaabo in si dhakhso ah looga jawaabo. Elohim waa nooc ka mid ah Alle oo ka kooban suurtogalnimada Midnimada Saddexmidnimada Qudduuska ah. Quraanka 'Ciise wuxuu ugu yeeray Ilaaha Axdiga Hore' Ilaaha (Allahumma) Rabbigeena '. Tanu way ka sii hor imanaysaa wixii Rabbigu u soo dhiibay Muuse markuu ku hadlay oo yidhi, “Waxaan ahay Rabbiga Ilaahiinna ah!” Muxammad wuxuu isku dayay inuu Islaamiyo Ilaaha Axdiga Hore.
● 'Isa oo ku sugan Quraanka loogu yeedhayo diyaafka samada oo ah qado gaar ah oo loogu talagalay dadka oo dhan, ugu yaraan iyo kan ugu weyn ee xertii Masiixa oo siman. Waxaa laga yaabaa in Muhammad uu ku fekerayo inuu miiska la dhigo miisaanka Cashada Rabbiga isagoo quudinta ah 5.000 sidii mid. Waxa uu u yeedhay diyaafaddan samada calaamad mucjiso ah. Suurada shanaad ee Quraanka waxaa loogu yeeraa "Banquet" (al-Ma'ida).
● Wiilka Maryan ayaa sidoo kale waydiistay inuu llaah idmo si joogto ah isaga oo raashinka loo baahdo. In diinta Islaamku macneheedu waa ganacsi (Sura Fatir 35:29-30) waana in ay keentaa guusha la taaban karo. Alle ma aha aabbe, laakiin waa sultanaan, oo si deeqsinimo leh u bixiya Muslimiintiisa - haddii uu sidaas jecel yahay.
● Ilaah ayaa isla markiiba ku biiray si 'salaadda Isa ee, taas oo ah mid muhiim u ah Islaamka. Inkastoo Isa weli uu tukanayay, Allah isla markiiba wuxuu bilaabay inuu miiska jannada hoos u soo diro 'isa xerta gaajada leh.
● A dhinac saamayn of Mucjiso Isa ayaa, si kastaba ha ahaatee, waa laga cabsado. Ilaahay wuxuu ku hanjabaa wax kasta oo aan rumaysadka lahayn ee uu xertiisa ku dhexjiray iyada oo ugu daran ciqaabtiisa oo dhan wuxuu ku dhufan lahaa adduunkan iyo kan xigta. halista waxaa sidoo kale si toos ah ugu Muslimiinta (!) haddii aysan rumeyn mucjisada 'Isa siday ugu qoran tahay Quraanka.
● Mufasiriinta Qur'aanka waxay ka wada hadlaan cuntooyinka kala duwan ee miiska marka loo eego dabeecadda kan u bixiyey hadiyado jannada. Muslimiintu waxay jecel yihiin in ay ogaadaan in khamriga, doofaarka iyo cuntooyinka kale ee mamnuucaya ay sugayeen iyaga oo ku jira janno, wali iloobin kii miiskii ka soo dejiyey samada. Badankood ma ogaan karaan in xitaa Islaamka wiilka Maryan uu leeyahay mudnaan gaar ah oo ay ku duceeyaan kuwa raacsan.
● Markaad Muslimiinta u sheegtid in Ciise haystay shan farood oo kibis ah iyo laba kalluun oo gacmihiisa ku jira si uu u quudiyo 5.000, waxaad arki kartaa wejiyo dheer, sababtoo ah kibis iyo kalluun maaha cunto gaar ah oo janno ah.
● Laakiin haddii aad ku dhiirigelisid dhagaystayaashaada oo ay u maleynayeen inuu Ciise u mahadceliyay yaraanta uu ku haystay gacmihiisa, ka dibna, markii uu mahadnaqayay, wuxuu noqday qadar weyn oo cunto ah. Markaa waad u sharaxi kartaa Muslimiinta in ay helaan cunto iyo lacag maaha caddaynta runta ah, laakiin rumaysadka horay u sii mahadnaqaya ayaa u keeni doona barako badan.
● Waxaan ognahay in Ciise qudhiisu yahay xarun mucjisadan, halkii uu ku dhufan lahaa isku dhufashada. Sayidkayagu wuxuu inaga nagu adkeynayaa in uu siinayo roodhida maalin kasta oo isaga raaca, isaga kalsooni oo isaga u sii mahadnaq in uu daryeelkiisa bixinayo. Tani waxay ka soo horjeedaa waxa Quraanka bara. Nimcada kitaabiga ah ee Ilaaha Aabbaha ah ayaa laga yaabaa inuu ka soo dego fikradda ah sultan aan ikhtiyaari ah oo badbaadiya qofkasta oo uu jecel yahay, oo dhumiya qofkasta oo uu jecel yahay.
● Fariinta aadka u caansan ee mucjisada Masiixa ee ku jirta Quraanka waa caddaynta inuu yahay dhexdhexaadiyaha kaliya ee u dhexeeya Ilaah iyo aadanaha. Waa xarun qarsoodi ah mucjisadan weyn oo Muslimiinta kastaa uu fahmi karo haddii uu diyaar u yahay. Salaadda magaca Masiixa waxaa suuragal u ah Muslimiinta sidoo kale. Masiixa ayaa albaabka Ilaah u furay annaga. Jidka Aabihiis ma jiro, marka laga reebo isaga. "Waayo, waxaa jira Ilaah keliya iyo dhexdhexaadiye keliya oo u dhexeeya Ilaah iyo dadka, waana ninka Ciise Masiix" (1 Timoteyos 2:5, Sura al-Anbiya' 21:28).
8. 'Isa the divine legislator In the Qur'an we find several passages which testify to the authority of Christ over the Torah. Two of these passages call his attitude and his handling of the scriptures of the Old Testament a sign and an evidence of his divine mission (Suras Āl 'Imran 3:50-51; al-Ma'ida 5:46-47; al-Zukhruf 43:63). The following points of this legal miracle should be taken into consideration:
Quraanka waxaan ka helaynaa marxalado dhowr ah oo markhaati u ah awoodda Masiixa ee ku saabsan Tawreed. Laba ka mid ah cutubyadani waxay ku magacaabaan dabeecaddiisa iyo sida uu ula macaamilayo Qorniinka Axdiga Hore calaamad iyo caddaynta hawlgalkiisa rasmiga ah (Sura Āl 'Imran 3:50-51; al-Ma'ida 5:46-47; al-Zukhruf 43:63). Qodobbada soo socda ee mucjiso sharci waa in la tixgeliyaa:
● Ilaahay wuxuu Masiixa u soo diray adduunka si uu u xaqiijiyo suurtogalnimada kaniisadda. Muxuu Muslimiintu marar badan u celinayaa Tawreed ayaa la been abuuray? Qur'aanka qudhiisa ayaa diiddan dalabkan dhowr jeer. Intaa waxaa sii dheer, Masiixa waa ereyga Alle khaas ahaaneed, sidaas awgeedna wuxuu matalaa Tawxiidka noloshiisa (Sura Āl 'Imran 3:50, al-Ma'ida 5:46 iyo al.).
● Alle waxa uu baray Wiilka Maryan - ka hor inta uusan dhalan - Tawxiidka, Maahmaahyadii Sulaymaan, Injiilka iyo Kitaabkii Asalkiisa oo dhan oo ay ka kooban yihiin (Sura Āl 'Imran 3:49). Sidaa daraadeed, Ciise wuxuu awood u lahaa in uu reer binu Israa'iil ula yimaado xikmadda rabbaaniga ah iyo inuu u sharaxo dhammaan su'aalaha aan xal loo helin ee sharcigu, sidaas darteed ka saaraaya sababta ay u kala qaybsan yihiin.
● Sida laga soo xigtay Quraanka, Masiixa wuxuu awood u leeyahay in uu bedelo oo uu tirtiro amarrada Alle ee Tawreed, iyo inuu xor ka dhigo kuwa isaga ka soo horjeeda. Sidaa awgeed Islaamka 'Isa waa sharci dajiye. Sharci ahaan maaha mid sharci ah. Tani macnaheedu waa wax ka badan mucjisada muslimiinta, maxaa yeelay iyaga oo ah Alle keligii waa sharci dejiye iyo soo bandhigaha sharciga. Sida laga soo xigtay Qur'aanka Masiixa wuxuu lahaa shaqadan rabbaaniga ah maxaa yeelay isagu wuxuu ahaa dharbaaxada ereyga Alle ee jidhka. Waa runta rabbaaniga ah iyo sharciga shakhsi ahaaneed (Yooxanaa 13:34; Suras Maryam 19:21, al-Anbiya' 21:91; al-Tahrir 66:21 iyo kuwo kale).
Aayadahan Quraanka kariimka ah waxaan maqli doonnaa ficil Islaami ah oo muujinaya Ciise, "Ha u maleyn in aan u imid inaan ka tirtiro Sharciga ama nebiyada, uma iman inaan baabi'iyo, laakiin inaan fuliyo." (Matayos 5:17-18) Waxa uu sidoo kale sharaxay, "Waxaa loo sheegay dadka horay ... Laakiin waxaan idiin sheegayaa!" (Matayos 5:21-48) "Ku alla kii afkiisa saaro waa inaan midkiinna nijaasoobin, laakiinse waxa afka ka soo baxa, kaas ayaa ninka nijaaseeya. (Matayos 15:11.16-20)
Muxammad waxa laga yaabaa inuu maqlo mabaadi'da asaasiga ah ee Masiixa wax ku baray, laakiin ma uu fahmin sida uu u oofinayo Sharciga, laakiin sida looga saari lahaa caqabadaha sharciga ee xertiisa. In qaab la yaab leh ayuu u sababay 'Isa xaqiiqda rabbaaniga ah ee lagu tirtirayo shuruucda iyo in lagu soo rogo kuwa cusub sida Rasuulka llaah.
● Inkasta oo wax kasta oo isbadal ah ee Sharciga ah uu ka dhashay Wiilka Maryan, wuxuu caddeeynayaa astaamaha cibaadada Islaamka: "Ka cabso llaah!" Islaamku ma xukumo jacaylka Ilaah ee ragga, ama jacaylkiisa. Ma jiro aabbe ilaah ah, mana rabo inuu badbaadiyo ragga oo dhan, laakiin awoodda kaliya, awoodda iyo awooda xukunka ah ee Alle, oo ah kaligii taliye, lama weydiin karo, looma qaban karo masuuliyad. Muslimiintu waxay caabudi karaan oo kaliya isaga oo caabudaan iyagoo qadarin leh.•
● Caqiido la mid ah waa in la siiyaa wariye kasta oo ka yimaada Alle. Quraanka, Wiilka Maryan ayaa laba jeer dalbaday dhammaan Yuhuudda, Masiixiyiinta iyo Muslimiinta: "Adeeca!" (Suras Āl 'Imran 3:51; al-Zukhruf 43:64). Jumladani waxa ay noqotaa mid Islaam ah oo soo noqota! Qof waliba wuu maamuusi doonaa Ciise Masiix, isaga iskutallaabtiisa isaga oo amarkiisa xajiya, sida ay uga baqayaan Alle! Islaamku ma baro, "rumayso raxmadda Alle, ama aqbalo cafiskii Masiixa ama jacaylkiisa sababtoo ah wuxuu kuugu jeclaaday marka hore," laakiin Ciise waxa uu ka dalbanayaa iimaanka iyo addeecida aan sharciga waafaqsanayn awoodiisa. Qof kasta oo fahamsan amarkan Quraanka wuxuu ka heli karaa qaab habboon oo loogu talagalay wacdinta muslimiinta. Muslimiintu waa inay marka hore bartaan sharciga Masiixa, ka hor inta aan la barin nimcadiisa badbaadada. Waa in aan marka hore la baranno 510 amarrada Masiixa ee ku sugan afar Injiillada oo lagu barbar dhigo amarradii 613 ee Muuse ee Tawxiidka. Markaas waa inaynu ku noolnahay sida uu sharcigu Ciise u yahay tusaalooyin run ah oo qiraya mawqifka muslinka ah in aynaan dhammaanba amarradiisa amarrada buuxin, sidaas darteedna waa inaanu maalin kasta weydiistaa cafis. Muslimiintu waa inay aqoonsadaan inaanay suurtagal ahayn in la fuliyo sharciga Masiixa nafteena, sababtoo ah wuxuu nagu amrayaa, "Noqo mid qumman ... sida jacaylka Aabbihiinna jannadu u sarreyso!" (Matayos 5:48) iyo "Jacaylka midkiinba sidaan kuugu jeclaaday." (Yooxanaa 13:34) Markaas wuxuu fahmi karaa in qofna uusan fulin karin sharciga Masiixa naftiisa, laakiin wuxuu u baahan yahay cafiska Ciise iyo badbaadadiisa maalin kasta. Nimcada Masiixa waa jidka keliya ee Aabbaha ah (Yooxanaa 3:16; 14:4).
● Muxammad waxa uu si dhaqso ah u joojiyay fikradaha iyo caqabadaha muhiimka ah ee uu ku sameeyay Ciise Masiix, "llaah waa Rabbigayga iyo Rabbigiinna, isaga caabudi, waa adeegga saxda ah." Ma uusan u oggolaan 'Ciise in Quraanka la yidhaahdo: "Waxaan u kici doonaa Aabbahay iyo Aabbahaa, Ilaahay iyo Ilaahaaga." Maya, Muxammad wuxuu dhigay 'Isa hoosta awoodda iyo awoodda Ilaah. Muxammad weligiis diyaar uma ahayn in uu qirto in Masiixu yahay Rabbiga qudhiisa oo ah ammaanta Aabbihiis. Inkasta oo uu aqbalay mabaadiida asaasiga ah ee diinta kiristaanka, haddana ugu dambeyntii wuu diidey kaalintiisa, wuxuuna ka dhigay Wiilka Maryan addoon ah llaah, kaas oo hoggaamiyeyaashiisa u horseedaya Jannada "habka ballaaran" ee Sharciga Islaamka.
Inkasta oo qalabkan Islaamiga ah, Muxammad ayaa xaqiijiyay Ciise Masiixa inuu yahay sharci dajiye oo xaq u leh inuu dalbado isaga oo raacsan shuruud la'aan isaga iyo dadka oo dhan. Waa inaynu dhammaan muslimiintu raadinaynaa farriintan Quraanka kariimka ah, oo iyaga ka caawiya - iyaga oo ka faaidaysta faanitaanka ruuxi ahaaneed - inay aqbalaan nimcada Masiixa iyaga oo iyaga ah.
Quraanka waxaa jira aayado dhowr ah oo tilmaamaya dabeecadda Masiixiyiinta si haboon. Laga soo bilaabo markhaatifurkii Muxammad waxa uu aqoonsan yahay in Wiilka Maryan uu awood u leeyahay inuu is-beddelo kuwa is-hoos-geliya kuwa ku-dhufashada iyo fowdada addoomaha naxariis leh. Tani waa mucjisada ugu weyn ee uu Masiixa sameeyay sida ku cad kitaabka Muslimiinta. Isbedelkaan ma dhicin hal mar, laakiin waxay dhacdaa maalin kasta, markaa iyo hadda. Masiixiyiintu waxaa lagu qeexay in ka badan 50 jeer Quraanka. Qaar ka mid ah Aayadahaas lama qorin Masiixiyiinta oo keliya, laakiin sidoo kale Yuhuudda sidoo kale (Suras Āl 'Imran 3:55.113-114.199; al-Ma'ida 5:65-68; al-An'am 6:90; al-Hadid 57:27; al-Tahrir 66:114 iyo al.).
In Sura Āl 'Imran waxaan ka akhrinaa qiimeynta Muxammad ee wafdi Christian ah oo ka timid Waqooyiga Yaman (Wadi Nadjran), oo ka hadlayay iimaanka isaga oo jooga Madiina saddex maalmood. Waxa uu isku dayay inuu ku guulaysto Masiixiyiinta kuwaas oo diinta Islaamka ah, Ilaahayna ha u dhaho 'Isa:
"Waxaan ka dhigi doonaa kuwa idin raaci kor gaalada ilaa maalinta sarakicidda." (Sura Āl 'Imran 3:55)
Muxammad iyo Muslimiintiisa ayaa la yaabay wafdi ka kooban 60 nin oo ka soo jeeda Nasaarada Waqooyiga Yemen. Muxammad wuxuu dareemay in dhaqankooda uu ka sarreeyaa keli ahaantiisa, laakiin wuxuu rabay in uu soo galo Islaamka. Waxa uu dareemay sarradooda iyo dhaqaalahooda dhaqaale ee ku saabsan sanamyadii iyo muxaafidka. Laakiin, dhab ahaantii, wadahadalkiisa ma uusan sheegin ra'yigiisa dhabta ah, oo ah in muslimiinta yihiin, dabcan, heer ka sareeya masiixiyiinta.
Isla sidaas oo kale waxaan ka akhrisanay addoommadii iyo shaqaalihii habeenkii ku kulmay si ay u akhriyaan Kitaabka Qudduuska ah, iyo inay caabudaan Rabbigooda iyagoo sadaqaysta. Kuwani waxay u badan yihiin Masiixiyiin hablaha, sababtoo ah kiniisad kale, xitaa dadka Yuhuudda, waxay u sujuudaan adeegyadooda. Muxammad wuxuu qiray inay raacayaan axdigooda Ilaah iyo in noloshooda ay ku salaysnayd rumaysadkooda. Waxa uu ugu yeeray "Kuwa wanaagsan" ee abaalmarin doona Allah (Sura Āl 'Imran 3:113-114). Waa maxay markhaati weyn oo ku saabsan masiixiyiinta hoose ee Hidjaz!
Sida laga soo xigtay Sura Āl 'Imran Muxammad sidoo kale waxay la kulantay Masiixiyiin kuwaas oo ah kuwo is-hoosaysiiya oo cibaadaysanaya, oo ka soo xigatay aayaadka Kitaabka Qudduuska ah iyagoo aan waydiisanayn lacag, iyaga oo ka soo horjeeda Yuhuudda ee Madiina oo inta badan u sheegi jiray wax ka mid ah Mishna ama Talmud markii uu soo iibsaday alaab laga soo saaro (Illaahay 3:199). Dhowr jeer oo Masiixiyiin ah sida ku cad Quraanka ayaa isku dayay in ay wacdiyaan Muxammad, laakiin aan micne lahayn.
Sura al-Ma'ida waxaa loo kala qaybiyaa khadka kala qaybinta Yuhuudda iyo Masiixiyiinta. Ilaahay waa in uu u muujiyo Muxammad:
"Waxaad dhab ahaan ka heli doontaa in kuwa idin soo horjeeda (Rumaystayaasha Muslimiinta) la daran cadownimada yihiin Yuhuud iyo Mushrikiinta. Waxa kale oo aad ka heli doontaa in kuwa (khilaafaya aad laakiin) waxay leeyihiin naxariis ugu weyn Mu'miniinta (Muslimiinta) waa kuwa kuwaas oo isugu yeeray Masiixiyiin (Nasara), maxaa yeelay waxay haystaan wadaaddo iyo raxan dhexdooda dhexdooda ah iyo (maxaa yeelay) iyagu ma aha kibirsanaan (iftiin: iyagu isma weynaanayaan)." (Sura al-Ma'ida 5:82)
Muxammad wuxuu aqoonsaday hoosaysiinta Masiixa ee raacsan, oo aan isku dayin inay isku weynaadaan. Isla mar ahaantaana Muhammad wuxuu fahamsan yahay in tayadani aysan ka soo dhex jirin laakiin waxay ka yimaadeen hoggaamiyeyaashooda ruuxi ah. Aayaddani waxa ay bixisaa aqoonsi cajiib ah ee sifooyinka Kiristanka ee maalmihii Muxammad.
In Sura al-Hadith waxaad akhrin kartaa falanqayn qoto dheer ee Nasaarada. Muxammad u ogow llaah,
"Ugu dambeyn waan yiraahnaa 'Isa, ina Maryan, raaca (Rasuulladayadii hore), waxaan siinnay Injiilka oo wuxuu geliyay qalbiyadii kuwii raaci jiray naxariistiisa, raxmaddiisa iyo diinta." (Sura al-Hadid 57:27)
Muxammad waxa uu kala soocay noocyo kala duwan oo Masiixiyiin ah: Wuxuu aqoonsaday dadkii doonayay inay noqdaan xertiisa, dagaalyahanada dhiirigeliya iyo kuwa caawiya kuwaas oo diyaar u ahaa inay u dagaallamaan si ay u dagaallamaan caqiidooyinka cusub, rumaystayaasha dhabta ah iyo cibaadada kuwa isku dayay in ay ku noolaadaan sida ku cad xukunkooda, dhab ahaantii 'Muslimiinta' naftooda u huray Allaah iyo Rasuulka (Masiixa) iyo isaga oo is dhiibay isaga oo aan shuruud ku xirnayn, isaga oo raacsan raacdeyaal, kuwaas oo isku dayay inuu ku daydo sayidkoodii, isaga oo raacay isaga oo dhexdhexaad ah iyo khafiif ah, iyo indho indheynaya camalladiisa kuwaas oo diyaar u ahaa inay u dhintaan markhaatifurintooda. Waxay weydiiyeen 'Isa keliya hal wax kaliya, inuu magacooda ku qoro kitaabka nolosha ee jannada (Sura Āl' Imran 3:52-53).
Sida laga soo xigtay Muxammad, ma aha dhammaan dadka Masiixiyiintu ka qayb qaataan qarsoodiga mucjisada ugu weyn ee uu Masiixu sameeyey - marka laga reebo kuwa raacsan! Muxammad wuxuu dareemay in Allah shakhsi ahaan mucjisooyin ku sameeyay. Oo wuxuu qalbigooda geliyey qaynuunno oo dhan, oo mid kalena ma jiro isaga maahmaahyo iyo naxariis iyo cadowgooda toona. Markii Muhammad uu ku fekeray asalkiisa asalkiisu ka soo jeedo, ma uu helin ilo kale oo aan ahayn, laakiin waa Injiilka, oo uu Ilaahay u waxyooday 'Isa. Muxammad wuxuu rumaysnaa in naxariistii iyo naxariistii qalbiyada Masiixa ay ka soo baxeen buuggan. Laakiin ma uu aqoonsan awoodda Ruuxa Quduuska ah ee Bawlos qoray, "jacaylka Ilaah ayaa lagu shubay qalbiyadeenna iyadoo Ruuxa Quduuska ahi na siiyey." (Rooma 5:5)
Muxammad wuxuu si fiican u dareemay Masiixiyiinta dhabta ah. Ma aha oo kaliya wuu ogaa Waraqa b. Naufal, oo ah xaaskii ugu horeeyay ee xaaskiisa Khadidja, oo ah odayga sharafta leh ee kooxda Kitaabka Quduuska ah ee Mecca, laakiin waxa uu sidoo kale la kulmay 83 Muslimiinta ah oo hoy u ahaa Masiixiyiin Abyssinia ah markii caqabadihii Muslimiinta ee Mekka noqdeen kuwo aan loo dulqaadan karin. Dabeecada Masiixiyiinta Abyssiniyaanka ayaa qaabeeyay sawirka Kiristanka ee Qur'aanka ee aan ka shakisanahay. Si kastaba ha noqotee, Abyssinians ayaa ku fashilmay in ay wacdiyaan qaxootiga Muslimiinta ah. Markii Muslimiintu ku soo noqdeen Madiina, kadib markii Islaamku uu xoogaystay, 230 Itoobiyaan ah ayaa aqbalay diinta Islam, laakiin kaliya hal Muslim ah ayaa waxaa jiray Masiixi. Tani mid yar ayaa u dhintay ka dib markii uu diintiisa (laga yaabo inuu geeriyooday).
Sura al-Saff Masiixiyiin waxaa loogu yeeraa caawiyayaal iyo wada shaqeenta Alle marka ay ku dhaarteen inay aaminsanyihiin 'Isa oo ku jira tijaabooyinkiisa waxayna diyaariyeen inay u dagaalamaan. Ilaahay baa u xaqiijiyey inay guuleysteen cadowgooda (Sura al-Saff 61:14).
Markaad akhrido aayadahan Quraanka waxaad arki kartaa in Muxammad uu ogaaday in 'Isa bedelay masafadiisa uu ku sawiray muuqaalkiisa. Iyagu way jecel yihiin kuwa iyaga neceb, oo kuwa baroorta way in ay u edbiyaan kuwa wanaagga ku neceb iyo silciyona (Matayos 5:44). Waxay ahaayeen kuwo is-hoosaysiiya oo aan qalbi xumayn, laakiin waxay ku tukadeen shirarkooda, xataa habeenkii haddii loo baahdo. Buuggooda ayaa ahaa xarunta iyo ilaha cibaadadooda. Masiixiyiintu, oo lagu sharraxay Quraanka, badanaa ma ahayn ajaanib, laakiin waa baadiyaha ka yimid waqooyiga, koonfurta iyo galbeed ee Jasiiradda Carabta. Masiixa waxa uu ku sameeyey mucjisada ugu weyn ee iyaga ku jira: waxay ku noolaan jireen wixii ay rumaysteen oo ay noqdeen abuur cusub oo ay ku sameeyeen nimcada Badbaadiyahooda. Maanta Muslimiintii hore waxay ku helayaan aqoonsigooda cusub sida Kiristanka Kitaabka Quraanka lagu sheegay. Aayadahani waxay ku caawin karaan marka ay la hadlaan qaraabadooda Islaamka.
Labo jeer oo aynu ka helnay Quraanka in Ciise Masiix iyo hooyadiis yihiin calaamado waaweyn oo ay sameeyeen Allah (Suras al-Anbiya '21:91; al-Sajda 32:50). Marka la muujiyo in Masiixa qudhiisu yahay a u saxiixa dadka iyo naxariista Eebe (Sura Maryam 19:21). Saddexdan aayadood waxay xaqiijinayaan qarsoodiga Masiixa ee ku jira Quraanka kariimka ah, kuna soo koobay asalka mucjisooyinka oo dhan. Ujeedada mucjisooyinkiisu maaha mid iskaa ah laakiin sida uu muujiyay isaga, oo ka shaqeeyey.
Carabiga ereyga calaamad waa ajatun taas oo macneheedu yahay mucjiso. Akhriso ereyga Alle labada erayba ka dhigo sharafka sharafta leh ee Ayman al-Baqaraah! Ciise Masiixa waa calaamad mucjiso ah Alle! Qoraalka Quraanka wuxuu ka tarjumayaa micnaha ereygan wuxuuna muujinayaa ujeedada: ragga! Qof kastaa waa inuu arkaa awooda Alle iyo jacaylka wiilka Maryan. Ma jiro nabi kale, boqor ama wadaad magaciisu yahay sharaf sida Quraanka, ma xitaa Muhammad. Masiixu waa mucjisada keliya ee ah in dadka oo dhammu ay aqoonsadaan. Dhamaan dadka kale ee Islaamku waxa ay ku guuleysteen koobab kaliya oo ka yimid ragga.
Marka aynu waydiisanno sababta Wiilka Maryan uu yahay calaamad wayn ee Alle ee Qur'aanka, waxaan ku helaynaa jawaabta Islaamku aaminsan yahay in Alle u abuuray Masiixa Maryan oo kali ah eraygiisa, iyada oo aan ka qaybqaadan aabaha aadanaha. Ilaahay wuxuu ruuxiisa ku neefsaday jidhkiisa. Sidaa daraadeed Masiixu ma aha oo keliya nin dumar ah, laakiin, sida uu qabo Quraanka, sidoo kale ruux ka yimid xagga jidhka nin. 'Isa waxaa jiray Ilaah xitaa intuusan dhalan. Ka dib markii uu u dallacsiiyay wuxuu ku soo laabtay Allah oo leh jidh, naf iyo ruux. Maanta, Ciise wuxuu la nool yahay Ilaah. Muxammad waa dhintay. Ciise Masiix waa kan keliya ee loogu yeeri karo "Ruuxa Alle" iyo "ereygiisa wuxuu ku jiraa". Sidaa daraadeed Masiixu waa calaamadda dareenka ah ee Alle ee dhammaan dadka.
Laga soo bilaabo tayada tayada leh - oo ah nin run ah iyo ruux run ah oo ka yimid Alle - dhammaan calaamadaha iyo mucjisooyinka ayaa ka dhacay, sida uu qabo Quraanka:
● Wuxuu yahay erayga Alle soo koobay. Wuxuu horay u hadli karaa ilmo cusub oo dhashay gabar
● Waxa uu yahay abuure neefta wax nooleeya - idamka Eebe!
● Wuxuu ka buuxsamaa raxmadda bukaanka iyo kuwa culus. Isagu bogsiiyey kuwa buka oo dhan
● Waa dhakhtarka ugu fiican adduunka - oo leh ogolaanshaha Eebe!
● Waxa uu ku guuleystay dhimashada, waayo wuxuu soo sara kiciyay kuwii dhintay - oo leh Alle ogolaansho!
● Waxuu yahay mid maskaxiyan ah, waayo "indhaha raajada" wuxuu arki karaa qof walba iyo wax walba.
● Wuxuu xaq u leeyahay inuu shafeeco u noqdo dhexdhexaadiyaha u dhexeeya Allaah iyo kuwa raacsan.
● Wuxuu cuntada ka soo dejiyey janno iyaga oo siinaya kibistooda maalin walba!
● Isagu waa sharci-dajiye oo wuxuu xaqiijiyay in aan la is-fili karin Tawxiidka. Wuxuu beddelay sharciyada rabbaaniga ah wuxuuna dejiyey amarada cusub.
● Wuxuu xaq u leeyahay inuu dalbado iimaanka-addeecidda laga bilaabo dhammaan ragga, oo ay ku jiraan Muslimiinta.
● Wuxuu bedelay jiliciyadaha diiniga ah ee raacsan oo uu raacay iyaga jacayl iyo is-hoosaysi.
Calaamadahaas Quraanka waa sida muraayad muujinaysa sifooyinka iyo tayada 'Isa, Wiilka Maryan. Waxay muujinayaan inwaa mucjisada oo dhan mucjisooyinka.
Kitaabka Qudduuska ah ee Ciise ayaa marar badan iyo mar labaad lagu dhex arki karaa aayadaha Quraanka. Muxammad wuxuu ku daray inta badan diinta kiristaanka ah in uu soo bandhigo Quraankiisa oo la barbardhigo Injiilka, sidaa darteedna Masiixiyiintu waxay u hoggaansamayaan Islaamka. Ma uu had iyo jeer muujin diiditaankiisa Masiixiyada ilaahnimadiisa, ama in uu tuuray iskutallaabta Ciise. Waxa uu qiray 'Isa naxariistiisa calaamadaha mucjisooyinka, dhakhtarka, awooda kuwa dhintay iyo sharci dajiye si ay u barbariyaan Masiixiyiinta Islaamka.
Sidaa awgeed, waxaan xaq u leenahay inaan ka soo qaadno markhaatiyada khalkhalka ah ee Kiristanka Quraanka kariimka ah iyo in ay u dhigaan macnaha saxda ah ee Injiilka oo dhan, sida runta keliya iyo habka nabadda ee Ilaah. Ujeedadu ma aha oo kaliya in la tuso sharciga iyo naxariista, amarrada iyo adeecidda rumaysadka, laakiin si ay u sawirtaan sawirka Masiixa dhabta ah ka hor indhaha Muslimiinta, si ay u arkaan, isaga jecel, isaga rumaysan, isaga, wuxuu helayaa noloshiisa weligeed ah iyo midhihiisa quduuska ah ee Ruuxiisa.
Tani, Ciise wuxuu naftiisa isugu yeedhay iftiinka dunida, kibista nolosha, habka saxda ah, runta weligeed ah, adhijirka wanaagsan, canabkiinna runta ah, sarakicidda iyo nolosha, Boqorka (taajkii qodxan), marka hore iyo kan ugu dambeeya. "Waxaan ahay ..." ereyada Ciise ee Injiilku waxa uu muujin karaa Muslimiinta raadinaya inuu fahmo in Ciise uusan ahayn mucjisooyin mucjiso ah laakiin jacaylka Ilaah iyo kan quduusnimadiisa shakhsi ahaantiisa.
5.15 -- B A A R I S
Haddii aad buug-yarahaan si bareer ah u barteen, waxaad si fudud u fahmi kartaa su'aalaha soo socda. Qof kasta oo ka jawaabaya boqolkiiba 90 dhammaan su'aalaha ku qoran siddeed buug oo taxanahan ah, si sax ah ayuu uga heli karaa xarunteena
siyaabo wax ku ool ah oo loo qabto wadahadal lala yeesho Muslimiinta ku saabsan Ciise Masiixa
sida dhiirigelinta adeegyadiisa mustaqbalka ee Masiixa.
Meeqo mucjisooyin ah oo Muusiko ah ayuu Quraanka ku tusayaa? Waa maxay ujeedooyinkooda iyo ujeedooyinkooda?
Intee jeer ayaan ka akhrisan karaa caddaynta (bayyinaat) ee Masiixa ee Quraanka? Waa maxay sifooyinka iyo ujeedooyinkooda?
Waa Ruuxa Quduuska ah sida ku cad Quraanka Muujiyay Masiixa si uu u sameeyo mucjisooyinka? (Fiiri Al-Baqara 2:87, 253; al-Ma'ida 5:111 iyo al.)
Sidee buu Muxammad u isku dayay inuu xoojiyo Nabinimadiisa isaga iyo caddaynta Masiixa? (Sura al-Saff 61:6)
Muxuu Muxammad ugu adeegsaday erayga calaamadda (aayadda) mucjisooyinka Masiixa ee Quraanka? Halkee ku sugan Injiillada aan akhrin karno isla mudadaas mucjisooyinka Masiixa? Sidee macnaha eraygani ugu kala duwan yahay labada buug ee?
Muxuu Ciise u tixgeliyay rabitaankii inuu mucjisooyin u arko rumaysad la'aan ama ficil ah inuu Ilaah u jihaadayo sida ku sugan Injiilka?
Muxuu ka yimid ilo Muxammad uu maqlayo halyeeyga in ilmaha dhashay dhawaan isla markiiba la hadlay? Muxuu Muxammad u dulqaatay oo rumaystay sheeko la yaab leh?
Sidee bay ku dhex jiraan halyeeygan ku saabsan 'Isa Quraanka kariimka ah ee Allah ayaa caddeeyay in Muxammad ahaa maya Nebi dhabta ah?
Maxay yihiin sheekooyinka suurtagalka ah iyo kuwa cajiibka ah ee hadalka ugu horreeya ee Masiixa ee ku jira Quraanka? (Sura Maryam 19:24-26)
Muxuu Muhammad u malaynayaa abuurista shimbir by Wiilka isa?
Muxuu yahay "ereyga" aan ku abuuray sharaxaadda Quraanku mucjisadan muxuu yahay Wiilka Maryan muhi muhim u ah wadahadalkeena Muslimiinta?
Maxaan uga gudbi karnaa 'Isa oo neefsanaya qaab shimbir ah oo dhoobo ah, Quraankuna wuxuu ku andacoonayaa in shimbirtu ay baxsatay? Halkee ku sugan Injiillada aan akhrin karno in Ciise uu dhab ahaantii neefsanayo dadka? Maxay ahaayeen natiijooyinka kala duwan ee neefsiga Masiixa ee ku jira Quraanka iyo Injiillada?
Siduu Muxammad u qoray Quraanka kariimka ah inuu yareeyo kartida 'Isa si uu u sameeyo mucjisooyinka? Muxuu Ciise qudhiisa u xaddiday awooddiisa inuu ku sameeyo mucjisooyinka Yooxanaa 5:19?
Waayo, dadka intooda badan oo indha la 'ayaa Masiixa indhihiisa u furi kara sida Quraanka? Oo sidee ayuu si ficil ahaan u furay indhahiisa sida uu u malaynayo Muxammad?
Sidee cudurka u khaldan u qiimeeyaa oo qiimeyn ku samaysay dalal badan oo Aasiya iyo Afrika?
Muxuu leeyahay awoodda Masiixa si uu u bogsiiyo kuwa baraska leh?
Maxay Daryeelka Wiilka Maryan u tahay xanuunka iyo murugada ee Qur'aanka?
Immisa qof oo dhintay ayaa Masiixa u koriyey oo u nooleynaya sida Qubraan?
Muxuu Masiixa u yahay qof keliya oo dhulka ku jira oo awood u leh inuu u sara kiciyo kuwii dhintay sida Quraanka?
Qarsoodigee ayaan u sharxi karnaa Muslimiinta aragtida Islaamka ah in Masiixu uu mucjisooyinkiisa ku samayn karo oo keliya isagoo adeegsanaya Ruuxa Alle ka yimid?
Sidee ayuu Ciise ugu dhex muuqdaa Quraanka? Sidee baan u isticmaali karnaa sirta ah ee Ciise oo dhan oo garanaya wada hadalladeena Muslimiinta?
Sidee ayuu Suyuti uga faallooday Quraanka markuu adeegsaday dhaqanka (Hadith) oo ku saabsan Ciise si uu u sharaxo sharraxnimadiisa?
Maxay muhiim u tahay sheekada Qur'aanka ee miiska miiska jannada loogu talagalay dadka raacsan?
Maxay Ciise ugu tukaday "Allahumma" oo aan ahayn "Oh Allah"?
Siduu Muxammad u xaqiijiyay in Masiixa uu xaq u leeyahay inuu dhexdhexaadiyo inta u dhexaysa isaga iyo Alle? Maxay Ilaahay uga jawaab celiyay shafeecada Wiilka Maryan?
Maxay Masiixa u beddeli kartaa Sharcigii Ilaahay ee sharciga Muuse? Sidee ayuu "u ogalaan karaa" dadka raacsan ee waxa Alle reebay? Ma Masiixa sida ku xusan Quraanka ma haystaa kaliya maamul ama sharci sharci dejin ah?
Maxay tahay sababta Ciise Masiix ee ku hadla badanaa cabsida Alle iyo marwalba weligiis ku saabsan jacaylka Ilaah?
Maxay amarka qeeybta ah ee Masiixa ee ku jirta Quraanka ah "ii addeeca?" macnaheedu waa dhammaan Muslimiinta? Maxay tahay sababta aan u baran lahayn sharciga Masiixa mowqifkayaga aan la yeelanay Muslimiinta?
Sidee Muxammad uu ula ciyaaro ereyada erayada isku dayaya inuu ka faaro awoodda Masiixa oo isaga ka dhigo inuu yahay qof cibaado leh oo Muslim ah?
Meelo kala duwan oo magac iyo magacba leh ayaa Muxammad abuuray si uu u sharaxo marxaladaha kala duwan ee qaan gaadhka ah ee kuwa raacsan Masiixa? Muxuu ugu yeeray "Muslimiin"?
Muxuu sifooyin gaar ah Muxammad ma isticmaalay si uu u muujiyo dadka raacaya Masiixa? Laga soo bilaabo halkee ayuu ogyahay sifooyinkaas?
Maxay bedbeddelka denbiilayaashu u dhex galaan addoomaha nabdoon ee Rabbiga ugu weyn ee mucjisooyinka Masiixa?
Maxay tahay sababta Isa oo Qur'aan ah oo keliya ee Aymanaah ka dhigtay Allah taariikhda? Muxuu macnaheedu yahay macnaha magacan iyo mawduuca u dhigma Masiixa miyaa laga heli karaa Injiillada?
Siduu Muhammad u sharxay oo u qotomay magacii Aayadda Quduuska ah ee Masiixa? Maxay macnaheedu noqon kartaa in Islaamka Masiixa yahay naxariista Alle soo galaya?
Meeqo toban magac oo muhiim ah iyo sifooyinka Masiixa miyaad ka soo qaadan kartaa mucjisooyinka Masiixa ee Quraanka?
Muxuu Muhammad u sawiray sawir aad u wanaagsan oo ah Masiixa walaaca Masiixiga ee soo booqday?
Sidee baan u isticmaali karnaa mucjisooyinka Masiixa ee Quraanka sida buundo ilaa Injiilka dhabta ah? Maxaa lagama maarmaan ah in la gaaro hadafkani adeegyadaa camalka ah ee muslimiinta?
Qof kasta oo ka mid ah kalfadhigan ayaa loo oggol yahay inuu isticmaalo buug kasta oo qormooyinkiisa ah iyo inuu weydiiyo qof kasta oo aamin ah oo loo yaqaan isaga oo ka jawaabaya su'aalahan. Waxaan sugeynaa jawaabahaaga qoran oo ay ku jiraan cinwaankaaga oo buuxa waraaqaha ama emailkaaga. Waxaan kuu baryaynaa Ciise, nolosha Rabbiga, inuu soo diro, hagto, xoojiyo, ilaaliyo oo uu kula joogo maalin kasta noloshaada!
Adiga oo adeega,
Abd al-Masih iyo walaalihiis oo ku sugan Rabbiga
Jawaabahaaga u dir:
ama email ahaan ugu dir:
Page last modified on March 24, 2020, at 12:57 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)